Ndimi makauraya . . .’chembere yakaberekeswa chitunha – Makuhwa.co.zw
MUKADZI chembere wekwaNjelele, kuGokwe, anonzi akaoneswa ndondo apo akaberekeswa chitunha chemwana ndokunzi afambe chinhambwe chinodarika makiromita 10 apo aipomerwa kuva nechekuita nekufa kwake.
Mbuya Sibusisiwe Ncube Maphosa (59), wemubhuku raRodgers, vanoti vakabhabhuriswa chitunha chemwana vachipomerwa kuti akanga auraiwa nemuporofita wekuchechi kwavo.
Mbuya Maphosa vakaberekeswa mutumbi waMellisa Nyoni nevabereki vake vanoti Hemish Nyoni (29) nemudzimai wake Tatenda Sibanda (24).
Mwana uyu ainge afira pamusha, Mbuya Maphosa ndokudanwa apo ainzi arwarisa zvisinei kuti ainge atofa nechekare.
Chembere iyi inonzi yakazoberekeswa chitunha ichinzi iende nacho kumuporofita kuti chinomutswa kubva mukufa.
Amai vaHemish, Mbuya Stella Machekera (63), vanonzi mumwewo akamanikidza Mbuya Maphosa kuti vabereke mutumbi waMellisa vachinzi vaiti “vatakure nyama yavo”.
Pakapinda nyaya iyi mudare raMambo Njelele, mhuri yekwaNyoni inonzi yakati mwana uyu akafira kumusana kwaMbuya Maphosa kwete kuti vakavaberekesa afa kare.
Mellisa, uyo akafa asvitsa gore nemwedzi mishanu yekuberekwa, anonzi akangorwara kwenguva pfupi.
Dare raMambo Njelele rakapa mutongo wekuti Hemish aripe Mbuya Maphosa nembudzi nekuvadzosera mari yose yavakashandisa kumhan’ara nyaya iyi kudare neyavaikwidza vanhu mabhazi nekuitawo zvimwe iyo inodarika $200.
Mambo Njelele, VaMoses Misheck Njelele, vanotsanangudza nyaya iyi:
“Mbuya Maphosa vakazomhan’ara mudare rangu vachiti vakaberekeswa chitunha asi vakaramba kuti varipwe vachiti vanoda kungoyananiswa. Isu sedare, takazoti varipwe mbudzi yekusvibiswa kwavakaitwa zita ravo uyewo nekudzoserwa mari yose yavakashandisa.
“Mbuya Maphosa vanonzi vanonamata nemumwe muporofita akaporofita mudzimai waHemish kuti mwana wake aizofa mumazuva mashoma aitevera. Muporofita uyu akazosiya nhamba dzake dzenhare kuna Mbuya Maphosa avo vakazodziendesa kumhuri iyi kuti vazoridza nhare kuti mwana wavo abatsirwe.
“Pakazomuka kunangana huroyi pakafa mwana uyu zvichinzi chiporofita chakaitwa chaiva cheSatanism.”
Vachitsanangudza pfumvu yavakaoneswa kuKwayedza, Mbuya Maphosa vanoti pakafa mwana uyu vakashevedzwa naHemish vakanzi vatakure mutumbi wake vaende kumuporofita wekuchechi kwavo akazivikanwa nekungoti Mai Bere. Ndipo pavakafambiswa kwemakiromita anodarika 10 vakaberekeswa chitunha ichi.
Hemish nemukadzi wake ndakavapa nhamba dzaMai Bere ndichiti vanobatsirwa asi mwana uyu akazofa vasina kuenda naye. Vakazoti akanga auraiwa kuburikidza nemuporofita uyu.
“Ndairohwa nekutukwa ndakaberekeswa chitunha ichi kusvikira takanosvika kudhibhi uko vakazonditi tidzoke kumba nechitunha ichi. Apa chakazotorwa naambuya vacho vakabereka,” vanodaro Mbuya Maphosa.
Mutumbi uyu unonzi wakazonangwa nawo kumba kwaHemish uko wakazonovigirwa.
“Panhamo apa, Hemish nemudzimai wake, amai vake nedzimwe hama vainditi ndidye nyama yechitunha ichi vachiti ndaiva ndabatsira mukufa kwemwana uyu uye chechi yedu yeHoly Spirit ndeye Satanism, inouraya vanhu.
“Panhamo ipapa Hemish akatora banga reOkapi nezidombo achiti muroyi ngaabve pano achida kundicheka apo aitobatwa nevanhu,” inotsanangudza chembere iyi.
Vanoti vave kugara vachitya sezvo Hemish achivaudza kuti vachashaika achiti ane vakuru veHurumende vaanozivana navo.
Mbuya Maphosa ishirikadzi, vanogara nevazukuru vavo uye vanoti vave kutyira kuti vanogona kupisirwa mumba nekuda kwekugara vachivhundutsirwa uku.
Hemish anotsinhira nyaya yekuti vakaberekesa Mbuya Maphosa chitunha chemwana wake.
“Ichokwadi zvakaitika. Asi mhosva yataipa Mbuya Maphosa ndeyekuti ndivo vakaunza nhamba dzemuporofita ainzi aizobatsira mwana apo akabva afa musi wakare,” anodaro.
Anoti mudzimai wake akanga asangana nemuporofita uyu akamutaurira kuti mwana aizofa zvichibva zvazoitika.
“Isu taiva nefungidziro yekuti muporofita uyu nechechi yake vanoita zveSatanism apo takazotora amai ava kuti vatiperekedze kumuporofita wavo, anomutsa mwana wedu,” anodaro Hemish.
Anoti nekuenda kwavakaita kudare, akanopihwa chirango chake, haachafa akazviita zvakare.
“Handisisina zvangu godo naMbuya Maphosa, zvakapera. Chakandinetsa ndechekuti mwana wangu akafa asina kurwara mushure mekunge aporofitwa nemudzimai wekupa Mbuya Maphosa nhamba dzenhare kuti vazotipa. Isu takazofunga kuti paiva nehurongwa hwekuuraya mwana kare. Asi zvakatopera.”
Pakashanyirwa nzvimbo iyi nevatori venhau, Hemish akanga asati abhadhara mari nembudzi zvaakanzi aripe Mbuya Maphosa uye akavimbisa Kwayedza kuti aizoripa mumazuva mashoma anotevera. Sabhuku wemusha ugere vanhu ava, Mai Lydia Masuku (45), vanoti nyaya iyi yakasvibisa bhuku ravo zvikuru. “Handina kumbobvira ndakaona zvakadaro, kuti chokwadi vanhu vangaberekese munhu chitunha? Zvisinei kuti Mbuya Maphosa vakanga varamba kuripwa, ndaida kuti vanhu ava vapihwe chirango chakaomarara kuti vamwe vazodzidza kubva ipapo,” vanodaro.
Related Topics:MUKADZI chembere wekwaNjelele
Ndakakudyisa ivhu rekumakuva